Uhlobo lwayo yonke into ngokusho komqondo weVoodoo wembulunga yonke: emcabangweni weVoodoo wembulunga yonke, futhi njengomqondo wawo woMuntu, zonke izinto nazo zonke izehlakalo zemvelo zinakho, ngokomqondo wazo, isimo esiphindwe kabili, kokubini nangokomoya
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: March 12, 2020 06: 04 Awekho amazwana
Amandla angahambelani angabonakali ubuhlakani obuningi baphezulu bemvelo, obubizwa ngamaVoduns (noma ama-Orishas phakathi kwamaYoruba). Singasho ngeH Hevieso (inkosi yezulu nombani), ...	Funda kabanzi
Sasingcono emikhubeni nasezinkambisweni zethu: ngaphambi kokufika kwabaphangi, abadlwenguli, amasela, ababulali nabangakholwayo baseNtshonalanga, abasilethela incwadi, abayibiza ngokuthi "Holy Bible"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Okthoba 14, 2019 10: 10 Awekho amazwana
Ukuthi bona uqobo abahloniphi. Konke lokhu ukuhlukanisa nokusilawula! Ngemuva kwamakhulu eminyaka! Thina ma-Afrika asikayiqondi inkohliso futhi siyaqhubeka noku ...	Funda kabanzi
Uhlelo lwe-Ifa, idiphozi enkulu yesayensi nezobuchwepheshe ukubhekana nalokhu ukuze uphathe kangcono ikusasa ... (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Okthoba 14, 2019 00: 00 Awekho amazwana
Imiphakathi yethu yasendulo ibilokhu isebenza ngendlela yokomoya yokuzalwa kabusha nokuphindukuzalwa kusukela ezikhathini lapho abakwa-Aakhu (okhokho bethu) bezulazula emhlabeni wonke ukuthola u-res ...	Funda kabanzi
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 15, 2019 00: 30 Awekho amazwana
Sizothini ngamaSulumane angakholelwa kuJesu, kepha athandaze ku-Allah ngokusho kokhokho bawo, kanye nabase-Asia abamaziyo uBuddha kokhokho babo kanye nabamnyama ...	Funda kabanzi
Ukwanda kobuthakathi base-Afrika phezu kobuKristu nobuSulumane: le nkulumo ayisiyo inkolelo noma "iBling Bling", kepha kuvela iqiniso elingokoqobo
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 2, 2019 14: 00 Awekho amazwana
Ukuphathwa kabi kwezenkolo zabantu base-Afrika abapristi bamaKatolika, abelusi kanye nabanye okuthiwa "bathumela" imams kaNkulunkulu, baba yisikhali sempi kimi.	Funda kabanzi
Umqondo we-zombie uvela kwi-vodoo, kuwumqondo wase-Afrika wokhokho abahlonishwayo nabathandekayo, kepha ubukhulu bokumhlophe bashintsha lokho kokuthile kodeveli… (VIDEO)
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Januwari 6, 2019 07: 38 Awekho amazwana
Umphakathi wamaKhristu amhlophe kanye nesonto lishumayela ukuthi i-vodoo eyonakalisayo ilimaza kanjani, imbi ngokufundiswa kukaJesu Kristu namanye amanga, kepha ubuKristu ...	Funda kabanzi